Ukwethulwa kwe-mesh indandatho yensimbi
Kunezinhlobo ezimbili ze-chain link mesh: I-Welded ring mesh kanye ne-non welded ring mesh.
I-welded ring mesh ifanelekela amagilavu ​​alwa nokusika, indwangu yokusika isigqoko nesigqoko. Ezinye izindandatho zempahla ekhethekile zisetshenziswa emkhakheni wezempi futhi zinemisebenzi yokuvikela izinhlamvu kanye nokuvikela.
I-solderless ring mesh isetshenziselwa amakhethini ophahleni, amakhethini nezihlukanisi zamakamelo, ngoba i-solderless ring mesh ishibhile kune-welded ring mesh, kodwa iqine ngokwanele kumakhethini, akulula ukuphuka futhi kulula ukwenza izimo ezihlukahlukene.
Ukucaciswa kwe-ring mesh
I-ring mesh yenziwe nge-carbon steel wire noma insimbi engagqwali noma i-copper wire futhi iqukethe izindandatho.
Okubalulekile Ububanzi bentambo Usayizi wendandatho Isisindo
insimbi engagqwali 304,316 0.53mm 3.8mm 3.8kgs/m2
Insimbi engagqwali 304,316 1mm 8mm 4.2kgs/m2
Insimbi engagqwali 304,316 1.2mm 10mm 4.0kgs/m2
Insimbi engagqwali 304,316 2mm 20mm 6.8kgs/m2
Insimbi engagqwali 304,316 3mm 30mm 10kgs/m2
Ukwelashwa okungaphezulu kwe-mesh ring yensimbi
A: I-vacuum plating ifanele insimbi engagqwali indandatho anezikhala
I-Argon ijova ngaphansi kwe-vacuum, i-argon ishaya okuhlosiwe, futhi izingxenye ezihlukanisiwe zalokho okuhlosiwe zikhangiswa ngemikhiqizo eqhubayo ukuze zenze ungqimba lwangaphezulu olufana nolubushelelezi.
Upende wokubhaka - wensimbi, insimbi nethusi
I-varnish yokubhaka iyindlela evame ukusetshenziswa kakhulu yokwelapha ebusweni ekukhiqizeni ikhethini lendandatho yensimbi. Hlanganisa i-pigment nombala oyifunayo, bese uyisebenzisa ekhethini leketanga lensimbi, futhi ekugcineni ubhake indawo ekushiseni okuphezulu ukuze uthole umbala ohlala njalo. Futhi izindleko eziphansi.
Indlela yokulenga yensimbi eyindandatho enezikhala
Ikhethini lenetha eliyindandatho lingalengiswa yinoma yisiphi isifaki esiqeqeshiwe sisebenzisa inkampani yenethiwekhi enehuku ebalulekile evela kuthrekhi eqinile yendabuko. Khetha kulezi zindlela ezi-5: iwasha encane, iwasha enkulu, indandatho, ingaphezulu lelebula nephakethe eliqhubekayo.
Okwedlule: Ingilazi yensimbi engagqwali elaminethiwe yokuhlobisa ucingo anezikhala
Olandelayo: Architectural zokuhlobisa metal ukwaluka anezikhala ikhethini anezikhala Kuvunguza